Lolita site n'aka Nabokov. Okpomoku nke kpochapu onwe gi na Fraide a nke Dolores. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Lolita nke Nabokov dere. Okpomoku nke kpochapu onwe gi na Fraide a nke Dolores.
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Novela, Akwụkwọ akụkọ ịhụnanya
Es Friday nke ihe mgbu. Ọrụ mbụ nke ezumike Ista na onomastics nke Dolores anyị nọ n'ụwa, n'agbanyeghị otu ha siri sie ike afọ gara aga ịgbanwe ụbọchị ahụ na Septemba 15. Maka ndị anyị si n'ụlọ akwụkwọ ochie na ọtụtụ lolas n'ime ezinụlọ anyị na-anọgide na-eme ya taa.
Onyinye m maka ụbọchị izizi na torrijas a bụ nyocha site na Lolita, nke kachasị edemede na ama ama ama ama site na pen nke onye edemede Russia na mba America Vladimir Nabkov. E nwere a nkenke nyocha na nhọrọ nke ahịrịokwu.
Banyere Wiki Lolita
Ebu ụzọ bipụta ya 1955, Lolita bụ nke ọtụtụ ndị nkatọ na-ewere dịka a ọkaibe nke akwukwo uwa nka na a oge gboo kpochapụwo. N'oge ya ọ bụ ajụrụ site n'aka ndị nkwusa anọ, na-edepụta ha ihe na-akpali agụụ mmekọahụ. Ọ bụ Olymplọ ọrụ Olympia Press, obere onye nkwusa nke Paris ndị ọkachamara na ọrụ rụrụ arụ, nke nwara ịpụta ya. Afọ atọ ka nke ahụ gasịrị, ọ pụtara na United States.
Ọ zụlitere ozugbo a Já nke asịrị, esemokwu na esemokwu, na mgbakwunye na ebubo nke ịgọnahụ nkwanye na igosipụta ọchịchọ ọha mmadụ kachasị ekwupụta na nke gbara ọchịchịrị. Ọkwá ya buru ibu ọbụna karị mgbe Stanley Kubrick kpọgara ya na fim en 1962 site na edemede nke Nabokov n'onwe ya. Ha gụrụ kpakpando na ya James Mason, Shelley Winters, Peter Ndị na-ere na Sue Lyon. E mechara nwee ọtụtụ nsụgharị mana nke a bụ ihe echetara echefu.
Ya mere, anyị nwere ọrụ dị iche iche akwụkwọ ọgụgụ dị iche iche nke sitere na akụkọ ịhụnanya na nke agụụ mmekọahụ gaa na eserese nke ọha mmadụ na-eme ihe masịrị ya. Ma n'ezie, n'ime ndị a oge ọhụrụ nke ịjụ ajụjụ, mmachi agụmagụ edemede, na na x maka okwu gbasara ụtọasụsụ na etu o siri dọọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ha etinyeworị ya n'ihe ngosi. Akụkọ banyere ara Humbert Humbert, onye nkụzi dị afọ iri anọ, maka Lolita na-eto eto ahapụghị onye ọ bụla.
Fọdụ n'ime ahịrịokwu ya
Lolita, ndu ndu m, oku nke mmirichukwu. Mmehie m, obim. Lo-li-ta: isi nke ire na-eme njem nke nzọụkwụ atọ na-agbada n'okpo ọnụ ahụ ruo mgbe ọ zuru ike, nke atọ, na nsọtụ ezé. Ọ bụ Lo, dị nnọọ lee, n'ụtụtụ mgbe ọ na-eguzo na ụkwụ ise na asatọ na otu sock-clad ụkwụ. Ọ bụ Lola mgbe ọ na-eyi uwe ogologo ọkpa ahụ. Ọ bụ Dolly n'ụlọ akwụkwọ. Ọ bụ Dolores mgbe ọ bịanyere aka n'akwụkwọ. Ma na ogwe aka m ọ bụ Lolita mgbe niile.
Ọ bụ ịhụnanya n'anya mbụ, n'ọhụhụ ọhụụ, n'oge ọbụla.
Ma ebe ọ nọ, onye furu efu n'etiti mmadụ niile, na-ata ahụhụ na pensụl, nke ndị nkuzi kpọrọ asị, ya na anya ụmụ nwoke niile etubere isi na ntutu ya na olu ya, Lolita m.
N'oge ahụ, anọ m n'ọnọdụ obi ụtọ na-agba ara ara; ma n’otu oge ahụ, o nwere aghụghọ nke onye ara.
Echere m na ihe niile bụ ajụjụ ịhụnanya; ka ị na-enwe mmasị n’ihe ncheta, ọ na-esikwu ike ma bụrụ onye ọbịa.
Ihe niile dị njikere. A kpughere akwara obi ụtọ. Obere ihe ụtọ ga-ezu iji tọhapụ paradaịs niile.
Na mberede anyi mere ara nzuzu, ihere, n’enweghi ihere, n’enwe ihunanya n’ebe ibe anyi no ...
Oh, Lolita, ị bụ nwa m nwanyị, dị ka Virginia bụ nke Poe na Beatriz bụ nke Dante.
Elere m ya anya lere ya anya, ma mara nke ọma dịka na m ga-anwụrịrị, na ahụrụ m ya n'anya karịa ihe ọ bụla echere n'echiche ma ọ bụ hụ n'elu ụwa.
Cheedị m: Enweghị m ike ịdị ma ọ bụrụ na ịcheghị m.
Anyị ji ịhụnanya akaghi onwe anyị hụ onwe anyị n'anya, yana ime ihe ike na-ebibi ndụ ndị okenye.
N’ebe ahụ, n’ọdụ ụgbọ mmiri aja, mita ole na ole site n’ebe ndị okenye anyị nọ, anyị dinara n’ụtụtụ ụtụtụ nile na paroxysm a na-enwusi ike, na-eji ohere ọ bụla a gọziri agọzi emeghe na oghere na oge; aka ya, ọkara zoro na aja, nọ na-amịpụta n'ebe m nọ, mkpịsị aka aja aja ya mara mma na-abịarukwu nso, dịka na nrọ;
O tiri nkpu na nkpu nkpu na olu ya, ma ghafee aru ya, ma ghaghagharia ya, weghachite isi ya, onu m na-ebe ákwá, ndi ikpe nke ndi ikpe, rutere nso n'olu ya, ka m na-eti ara aka ekpe ya. lastestestest heartbeat of ecstasy nwoke ma ọ bụ anụ ọjọọ amatabeghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Lolita nke Nabokov dere. Okpomoku nke kpochapu onwe gi na Fraide a nke Dolores.